Passengers line up while trying to depart Sydney’s domestic airport Friday, Dec. 18, 2020. From late Saturday afternoon, Dec. 19, 2020, until midnight Wednesday, residents of Sydney’s northern beaches will only be permitted to leave their homes for five basic reasons: medical care, exercise, grocery shop, work or for compassionate care reasons asacluster of cases in the area increases. (Dean Lewins/AAP Image via AP)
ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဆစ်ဒနီမှ ထွက်ခွာမည့် ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံသည် ခရစ္စမတ်မတိုင်မီ လေးရက်အလိုတွင် ၎င်း၏အကြီးဆုံးမြို့၌ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုအသစ်တစ်ခုကို ထိန်းချုပ်ရန် အပြင်းအထန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ဆစ်ဒနီမြို့ရှိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ၊ အားကစားရုံများ၊ ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့် စူပါမားကက်များအပါအ၀င် နေရာ ၅၀ ကျော်တွင် ကူးစက်ခံနေရပြီး ၎င်းနေရာများသို့ လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သူများကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် သီးခြားနေထိုင်မှုများပြုလုပ်ရန် အာဏာပိုင်များက တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ဆစ်ဒနီ၏မြောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဆင်ခြေဖုံးဒေသများတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအသစ်တစ်ခုသည် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၈၀ ကျော်သို့ တိုးများလာခဲ့ပြီး အခြားပြည်နယ်များနှင့် နယ်မြေများအားလုံးသည် ဆစ်ဒနီ၏ ၅ သန်းနေထိုင်သူများနှင့် နယ်နမိတ်ချင်းထိစပ်နေစေကာ သူတို့၏ခရစ်စမတ်ခရီးသွားအစီအစဉ်ကို စိတ်ပျက်မှုများ ဖြစ်စေခဲ့သည်။
Qantas လေကြောင်းလိုင်းက ကြိုတင်လက်မှတ်ဝယ်ထားသူအတော်များများသည် ကူးစက်ရောဂါမတိုင်မီကမ္ဘာပေါ်တွင် အလုပ်အများဆုံးလမ်းကြောင်းများဖြစ်သော ဆစ်ဒနီနှင့်မဲလ်ဘုန်းမြို့အကြားနှင့် တနင်္လာနေ့မှအခြားပြည်တွင်းခရီးစဉ်များအကြားတွင် ၎င်းတို့၏ဘွတ်ကင်များကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။